Ny kinova Docker Container 18.09 vaovao dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana vaovao | Avy amin'ny Linux
Docker dia tetikasa loharano misokatra iray izay mandeha ho azy ny fametrahana ireo fampiharana ao anaty kaontenera rindrambaiko, manome sosona fanampiny amin'ny virtualization fampiharana ary automation amin'ny rafitra fiasa marobe.Nyawang
Docker mampiasa endri-javatra fitokana-monina amin'ny kernel Linux, toy ny cgroups sy ny namespaces hahafahana mamela "kaontenera" tsy miankina.
Amin'izany fomba izany, Docker dia manome fa ireo kaontenera ireo dia mihazakazaka ao anaty ohatra iray amin'ny Linux, misoroka ny fisorohana sy ny fitazonana ireo milina virtoaly.
Ny fanohanan'ny kernel Linux ho an'ny namespaces dia manavaka ny fomba fijerin'ny rindranasa ny tontolon'ny asany.
Ao anatin'izany ny hazo fanodinana, tamba-jotra, ID an'ny mpampiasa, ary rafi-drakitra napetraka, ary ny vondrona kernel dia manome fitokanana loharano, ao anatin'izany ny CPU, fahatsiarovana, block I / O ary tambajotra.
1 New Version of Docker 18.09
1.1 Fanatsarana ny BuildKit
2 Raha oharina amin'ny kinova taloha
New Version of Docker 18.09
Ny kinova iray amin'ny Docker Isolated Linux Container Management Toolkit 18.09 dia aseho, izay manome API avo lenta ho an'ny fanodikodinana kaontenera amin'ny ambaratonga mitokana an'ny fampiharana tsirairay.
Docker dia mamela anao handefa dingana tsy ara-dalàna amin'ny fomba mitoka-monina ary avy eo hamindra sy hamehezana ireo kaontenera noforonina ho an'ireo fizotran-javatra ireo amin'ny lohamilina hafa, manala ny asa rehetra amin'ny famoronana, fikojakojana ary fikojakojana ireo kaontenera.
Hatramin'ny Docker 18.09, nahazo tombony ny fotoana fanohanana famoahana satria nitombo ny 4 ka hatramin'ny 7 volana noho ny fanavaozana ny tsingerin'ny fampandrosoana ny Docker Community Edition.
Ny iray amin'ireo teboka matanjaka hanasongadinana ity famoahana Docker vaovao ity dia ny fotoana maharitra fitantanana ny kaontenera dia nohavaozina tamin'ny famoahana containererd 1.2.
Izany dia nanamafy ny fampiasana ny rafitra fitantanana kaontenera gRPC ary niantoka ny fifanarahana amin'ny sehatra Kubernetes 1.12 ary nanatsara ny fanohanan'ny sary eran-tany ho an'ny maritrano samihafa (arko-maro).
Etsy ankilany, ao amin'ny Docker 18.09 nitarina ny fahafaha-manana backend vaovao (manome ny fiasan'ny baiko "docker build"). Mba hanatanterahana ny asan'ny fanangonana fako ho azy izay tohanan'ny fandefasana asa miorina amin'ny akany ary tsy mitaky fahefan'ny mpampiasa faka mandritra ny asa.
Fanatsarana ny BuildKit
Docker 18.09 dia misy koa ny safidy hanemorana ny BuildKit. izany dia mari-trano fananganana vaovao izay manatsara ny fahombiazana, ny fitantanana fitehirizana ary ny fanitarana, sady manampy endri-javatra vaovao manan-danja.
Fanatsarana ny zava-bita: BuildKit dia misy maodely mifanaraka amin'ny endrika nohavaozina sy modely caching izay mahatonga azy io ho haingana kokoa, marina kokoa ary mora entina kokoa.
Miaraka amin'ity fanovana sy fampifanarahana ny maritrano ity koa Ireo mpamorona docker dia mamela ny fanavaozana ny motera misy ny Community mankany amin'ny motera Enterprise miaraka amina fahazoan-dàlana tsotra.
Ho an'ireo mpampiasa ankehitriny ny kinova Docker Community, ity hetsika ity dia midika hoe manokatra endrika fiarovana maro amin'ny orinasa ary mahazo fidirana amin'ny fanampiana sokajy orinasa an'i Docker sy ny politikam-pikojakojana manitatra.
Raha oharina amin'ny kinova taloha
Ny kaody dia novaina mba handaminana ny fanatanterahana ny asa ary ny modely cache dia novaina, izay nanamora ny fanafainganana ny fivoriambe.
Ohatra, rehefa manandrana ny tetikasa Dockerfile Moby dia nitombo ny hafainganam-pandeha 2 ka hatramin'ny 9,5 noho ny fanatanterahana tsikelikely ny dingana fitomboana maro, tsy firaharahana ireo dingana tsy ampiasaina sy fisie antontan-kevitra miampy eo anelanelan'ny seta hita. toe-javatra.
Nanampy ny fahaizana mampiditra zava-miafina ao amin'ny Dockerfile sy afindra soa aman-tsara izy ireo mandritra ny dingan'ny fananganana, tsy mitahiry azy ireo amin'ny sary vokatr'izany ary tsy apetraka ao amin'ny cache cache.
Ny fahaizana mandroso ssh ssh-agents sockets, dia ampiharina, ohatra, raha te hifandray amin'ireo tahiry tsy miankina mampiasa fifandraisana efa misy amin'ny alàlan'ny ssh-agents.
ankehitriny fivoriana cache dia azo tantanana, misaraka amin'ny sary.
Nanampy baiko vaovao "docker builder prune" hamafana ny cache sy ny fahaizana mamaritra ny lalàna momba ny fanadiovana sy maro hafa.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao azonao atao ny mitsidika ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny kinova vaovao an'ny Docker Container 18.09 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana vaovao
Fahalemena roa no voamarina tao amin'ny fandavana sernel an'ny Linux
LIBRECON 2018: famakafakana ny zava-nitranga tamin'ny hetsika